एप्पल विरुद्ध मुद्दा | RABHI
एप्पल विरुद्ध मुद्दा
आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम ‘आइओएस ८’ ले ओगट्ने मेमोरी स्पेसका विषयमा उपभोक्तालाई जानकारी नगराई ढाँटेको आरोपमा आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलमाथि मुद्दा लागेको छ । आइपड, आइफोन तथा आइप्याडहरुमा लेखिएबमोजिम स्पेश नभएको भन्दै अमेरिकी उपभोक्ताले एप्पलमाथि मुद्दा दायर गरेका छन् ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित अदालतमा मियामीका बासिन्दा पाउल ओर्शान र क्रिस्टोफर इन्डाराले एप्पल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन् । एप्पलका डिभाइसहरुमा भनिएभन्दा करिव २३ प्रतिशत कम मेमोरी रहेको दावी गर्दै उनीहरुले मुद्दा दायर गरेका छन् ।
साथै पुरानो ‘आइओएस-७’ अपरेटिङ सिस्टमबाट ‘आइओएस-८’ मा अपग्रेड गर्नका लागि उपभोक्ताले आफ्नो ग्याजेटको थप १.३ जिबी स्पेश गुमाउनु परेको तथ्य समेत वादीपक्षको छ ।
एप्पललका ग्याजेटहरुमा दाबी गरिए अनुसारको स्टोरेज क्षमता नहुँदा उपभोक्ताका ग्याजेटहरुको मेमोरी छिटै भरिने र त्यसपछि उपभोक्ताहरु पैसा तिरेर आइक्लाउड स्टोरेज सिस्टम खरीद गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत निवेदनमा गरिएको छ । उनीहरुले एप्पलको यस्तो कामले एप्पल डिभाइस उपभोक्ताको दशौँ लाख डलर नोक्सान पुगेको भन्दै ठूलो रकम क्षतिपूर्ति समेत दाबी गरेका छन् ।
गएको सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर एप्पलले ‘आइओएस-८’को पछिल्लो अपग्रेड सार्वजनिक गरेको थियो । तर आइफोन सिक्स र आइफोन सिक्स प्लसलाई यो अपग्रेडले निकम्मा बनाइदिएपछि एप्पलले पहिलो संस्करणको ‘आइओएस-८’ अपग्रेड फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । एप्पलले यस्तो त्रुटीपूर्ण अपरेटिङ सिस्टमको लागि माफी समेत मागेको थियो ।
१६ जिबी फोनको क्षमता किन हुन्छ १२ जिबी मात्र ?
तपाइँको कम्प्युटर वा फोनको स्टोरेज क्षमता कति छ ? यसको उत्तर द्विविधापूर्ण नहुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य भएको छ । तपाइँले १६ जिबी इन्टर्नल स्टोरेज भनिएको फोन किन्नुभयो भने कहिल्यैपनि १६ जिबी बराबरको डाटा त्यसमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्न । वास्तवमा तपाइँलाई थाहा हुँदैन, जबसम्म तपाइँले फोन किनेर त्यसलाई खोलेर सेटिङमा गएर उपलब्ध स्टोरेज क्षमता चेक गर्नुहुन्न ।
तपाइँले किनेको ग्याजेट जति स्टोरेज क्षमताको भनिएको छ उति किन हुँदैन होला ? यसका दुई कारण छन्:
फोन निर्माताले भण्डारण क्षमतालाई भिन्न रुपमा गणना गर्छन् भने सफ्टवेयरले भिन्न रुपमा
यो प्रायः सबैखाले कम्प्युटिङ डिभाइसमा उत्पन्न हुने समस्या हो । डिभाइस निर्माताले १ जिबीलाई एक तरिकाले गणना गर्छन् र सफ्टवेयर प्रयोग भएको उपकरणले अर्कै तरिकाले गर्छ । यसको अर्थ ३२० जिबी ल्यापटपको कहिल्यैपनि ३२० जिबी इन्टर्नल स्टोरेज हुँदैन । १ टिबी हार्ड डिस्कमा प्रयोग गर्न मिल्ने १ टिबी स्टोरेज हुँदैन । त्यसैगरी १६ जिबी क्षमताको फोनमा १६ जिबी स्पेश उपलब्ध हुँदैन ।
यसको हुनुको कारण फोन निर्माताले १ गिगाबाइट बराबर १ हजार मेगाबाइट गणना गर्छ । सफ्टवेयरले भने यसलाई फरक ढंगले लिन्छ । अर्थात् १ गिगाबाइट बराबर १०२४ मेगाबाइट गणना गर्छ । त्यसकारण फोन निर्माताले भनेको १ गिगाबाइटमा जम्मा १ हजार एम बी हुन्छ न की १०२४ एम बी । अर्थात् सफ्टवेयरको गणनामा १ गिगाबाइट क्षमता पुग्दैन ।
अर्को शव्दमा भन्दा डिभाइस निर्माताहरुले क्षमता मापनका लागि डेसिमल प्रणालीको प्रयोग गर्छन् । जबकी सफ्टवेयरले बाइनरी युनिट प्रयोग गर्छ ।
एप्पलले यस बारेमा आफ्नो वेबसाइटमा स्पष्ट रुपमा ब्याख्या समेत गरेको छ । ‘एक जिबी बराबर १ अर्ब बाइट, वास्तविक फम्र्याटेड क्षमता कम ।’
यस अर्थमा आइफोन अर्थात् १६ जिबी क्षमताका अन्य फोनको वास्तविक फम्र्याटेड क्यापासिटी कति हो त ?
बाइनरी विधि अनुसार १ जिबी बराबर १ अर्ब ७ करोड ३१ लाख ४१ हजार ८२४ बाइट । जस अनुसार १६ जिबी इन्टर्नल स्टोरेज भएको भनिएका आइफोनको सफ्टवेयरको पहुँचमा हुने वास्तविक स्टोरेज क्षमता १४.९ जिबी हुन्छ । त्यसैले १६ जिबीको आइफोनको वास्तविक स्टोरेज क्षमता १४.९ जिबी हुन्छ ।
पख्नुस् कुरो यत्ति मात्र होइन
अपरेटिङ सिस्टमले ओगटेको ठाउँ
१६ जिबी क्षमताको भनिएको फोनमा उपलब्ध वास्तविक १४.९ जिबी क्षमता पनि तपाइँले कहाँ पूरै उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र ? उक्त इन्टर्नल स्टोरेजमा फोनको अपरेटिङ सिस्टमले समेत ठाउँ लिन्छ । तपाइँको फोनमा इन्स्टल गरिएइको एन्ड्रोइड तथा आइओएस अपरेटिङ सिस्टमले उही स्टोरेज प्रयोग गरेको हुन्छ ।
त्यसकारण अपरेटिङ सिस्टमको साइज अनुसार तपाइँले आफ्नो उपलब्ध १४.९ जिबी भन्दा कम स्टोरेज प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाइँका फाइल भण्डारण गर्नका लागि । कति कम स्टोरेज छ भन्ने कुरा कुन अपरेटिङ सिस्टम हो भन्नेमा भर पर्छ ।
उदाहरणका लागि एन्ड्रोइड ललिपप प्रयोग भएको नेक्सस फाइभ स्मार्टफोनमा मुख्य सफ्टवेयरले नै २.६ गिगाबाइट स्पेस ओगटेको हुन्छ र उपभोक्ताका लागि केवल १२.५ जिबी मात्र मेमोरी उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै सामसुङ टचविज युजर इन्टरफेस सँगै एन्ड्रोइड ४.४ सफ्टवेयर प्रयोग भएको सामसुङ ग्यालेक्सी एस फाइभमा ९ जिबी भन्दा पनि कम स्टोरेज उपलब्ध हुन्छ ।
त्यसकारण अब फोन किन्दा त्यसमा भनेजत्ति वा लेखिएजत्ति नै स्टोरेज हुन्छ भन्ने विश्वास र भ्रममा नपर्नुस् । १६ जिबी क्षमताको भनेर किनेको फोनमा १२ जिबी देखि ९ जिबीसम्म मात्र स्टोरेज उपलब्ध भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
Posted by kpcat at 7:47 PM
No Comment to " एप्पल विरुद्ध मुद्दा "